Inhloko zeNdaba Nhlangula 07, 2019
****** Umthethwandaba weHarare wethule isinqumo sokuvumela abahlanu abalwela ilungelo loluntu yokuthi benelise ukuhlawula isibambiso esebail ecaleni abalibotshelwe ngenyanga edluleyo lokufuna ukugenqula uhulumende. Abahlanu laba babotshe enkundleni yendizamtshina e Harare, bevela emhlanganweni wezamalungelo oluntu eMaldives.
*****Abenhlanganiso ye Broad Alliance Against Sanctions lokhe besahlala lokulala bucwadlana leguma lapho okulamahofisi esigodlo sommeli weMelika eZimbabwe ngenjongo yokufuqa uhulumende walelo lizwe ukuthi ethule izijeziso zomnotho ezetheswa inkokheli yebandla le Zanu PF.
********** Iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders lizadibana lele Yadah kusasa ngoMgqibelo kodwa abaqeqetshi balo bevele sebekhangelele kumdlalo waleliqembu lele Dynamos kuviki yetshumi lambili eyesigaba se Castle Lager Premier Soccer League.
******** Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi wengoma zokholo, uSehlaphi Mthombeni odabuka eNtabazinduna okwamanje osesebenzela edolobheni leHarare.
********** KuLiveTalk namuhla sizanika ithuba lina balaleli bethu ithuba lokuthi litsho imibono yenu ngokwenzakala elizweni okuphathelane lokonokala kwesimo somnotho, ukwephulwa kwelungelo loluntu lezombusazwe. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani imlayezelo kunombolo ezithi 0012024650318. Lingakhuthwa yilezindaba lezinye kuStudio 7 ngo half past 7 ntambama lango half past 6 ekuseni, kumagagasi athi 909 am, 4930, 15580 laku 6080 kilohertz kuShortwave.